स्वर्णिम प्रेम सहितको यौन जीवनका हकमा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ आश्विन २०७७, सोमबार १७:५९ English
स्वर्णिम प्रेम सहितको यौन जीवनका हकमा
जसरी नदी वा खोला रोक्न मिल्दैन र सकिँदैन तर नहर बनाएर त्यस नदिलाई सिंचाई वा विद्युत उत्पादन गराउने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । त्यसरिनै विर्य पनि रोक्न मात्रै मिल्दैन तर अन्य उर्जामा बदल्न मिल्छ ।उर्ध्वगामी गरेर कुण्डलीनी जागरण गरेर मानसिक तथा अध्यात्मिक क्षमता बढाउन सकिन्छ । भौतिक अर्थात् शारीरिक शुखको अन्तिम सिमा यौन आनन्द हो । मान्छे त्यही सुखको खोजीमा धेरै बुद्धी, शक्ति, समय र धन खर्च गर्दछन् । साथ् साथै यौनको गलत ज्ञानले सवैलाई वर्वाद गरेको छ । सबैले अगाडि नकार्ने तर सबैभन्दा खोजिगरिगरि लुकेर पढ्ने विषय यौनको सहि ज्ञानले सवैको कल्याण हुन्छ ।
यौनको सही ज्ञान तथा विधी जान्नका लागि आजको समयमा गाह्रो भने पक्कै छैन । हातहातमा मोवाइल भएको यो जमानामा उपलब्ध इन्टरनेटको माध्यमबाट समस्या सार्वजनिक गरेको मिनेट भरमै उत्तर र समाधानको उपाय पाउन सकिन्छ । त्यसको अलावा प्रश्न र सल्लाहको लागी तपाईं नजिकै रहेको चिकित्षक वा अस्पतालमा समेत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । साथै जिज्ञासा तथा चासोको विषयमा खोज तथा छलफल आफ्नै उमेरका साथिभाइसंग पनि खुलेर छलफल गर्दा पनि समाधान गर्न सकिन्छ ।
आजको समयमा यौनको गलत प्रयोग तथा गलत ज्ञानले धेरैको योन रोग, मानसिक रोग पारिवारीक समस्या, सामाजिक समस्या बढिरहेको छ ।
अझै त्यसमाथि विवाह पश्चात पनि पर पुरुष वा परस्त्री संगको सम्बन्धका कारणले यो समस्या बढेको मान्न सकिन्छ । यौन जस्तो अति संवेदनशिल विषयमा बोल्नु अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने यस विषयमा बिज्ञ म पनि हैन तर आफुलाई थाहा भएको ज्ञान अरुलाई बाड्न पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
पिसाव थैलिमा धेरै पिसाव भएपछी पिसाव लागेजस्तो विर्य थैलीमा विर्य धेरै भएर मात्र यौन उत्तेजना धेरै हुने हैन ।
विर्य थोरै भए पनि उत्तेजना बढाउने खाना तथा वातावरण छ भने विर्य नास धेरै हुन्छ ।
विर्य जति लामो समयसम्म नखसाली राख्यो त्यति वाक्लो रगाढा रंगको हुन्छ। त्यसबाट बनेको सन्तान राम्रो हुन्छ।
लामो समयको अन्तरालमा गरेको सम्भोगबाट धेरै सन्तुष्टि,आनन्द र स्वास्थ्य पनि मिल्छ ।
लामो समयको अन्तरालमा सम्भोग गर्नेहरूमा प्रेम, धैर्यता, सहनसिलता । बढी र तनाब ,रिस, आवेश, उत्तेजना चंचलता कम हुन्छ।
विर्य नास जति धेरै हुन्छ त्यति अनुहारको चमक, दिमागको तेज, शारीरको स्फुर्ती त्यति नै घट्दै जान्छ ।
बिर्य बढ्ने खानाले अनुहारको चमक, दिमागमा तेज, हड्डी र नसामा बल शरिरमा लचकता र स्फुर्ति पनि ल्याउँदछ ।
एउटा औलाले चरम आनन्द दिन सक्ने योनीलाई लिङ्ग सानो भएर सन्तुष्टि भएन भन्नु विधी नबुझेर वा मानसिक (साइकोलोजिकल) असन्तुष्टी मात्र हो ।
सन्तुष्टिका लागि योनि सानो वा टाइट चाहिन्छ भन्नेका लागि लिङ्ग ठूलो बनाउन संभव भएन भने योनी सानो टाइट बनाउने विधिहरू अपनाउनुपर्छ । योग शिक्षक संग सिकेर त्यसको लागी विशेष अभ्यास गर्नुपर्दछ । लुज अवस्थमा विहानै चारैतिर र तल माथी तन्काउने दुध दुहेको जसरी दायाँ वायंबाट फेदै देखी टुप्पो सम्म दवाएर तान्ने । उत्तेजित भएपछी चारैतिर मोड्ने टुप्पोबाट दवाउने नियमित गर्नु होला । अरु उपाय पछी पेज प्रोफाइलमा पोस्ट गर्नेछौ ।
योनी सानो टाइट बनाउने विधि, अश्विनी मुद्रा:
योअचुक तर सजिलो एउटा उपाय.! जो भाग्यमानीले मात्र विश्वास र प्रयोग गर्दछन् ।
यो सानो उपाय (ज्ञान)ले यौनाङ्गको सवै समस्या र कमजोरी निर्मुल हुन्छ ।
यौन दुर्वलता,सिघ्र स्खलन,अति इच्छा हुनेको लागी ।
महिनावरी दुखाई र योनी टाइट गर्न अत्यन्तै उत्कृष्ट उपाय अश्विनी मुद्रा (मलद्वार खुम्च्याउने) अभ्यास नियमित गर्नुहोला ।
योनी ४० वर्षको पनि १६ बर्षको भर्जिन जस्तो हुन्छ ।
लिङ्ग सानो भएपनी दुबैलाई सन्तुष्टि यथेष्ट हुन्छ ।
अनुहार चम्किलो साथै दिमाग तेजिलो हुन्छ ।
कुण्डलिनी जागरणमा मद्धत गर्दछ।
अति यौन इच्छालाई घटाउँदछ ।
२घन्टौसम्म विर्य नखसाई यौन सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
विर्य नखसाली यौनको चरम आनन्द पाउन पनि सकिन्छ ।
पाठेघर खस्ने, महिनावारी र बच्चा जन्माउँदाको कष्ट पिडा अत्यन्तै कम हुन्छ ।
पिसाव चुहिने , छिटो लाग्ने तथा रोक्न नसक्ने समस्यामा अत्यन्त लाभकारी छ ।
सेतो पानी तथा घातु वग्ने रोग नास हुन्छ ।
घन्टौसम्म विर्य नखसाली यौन आनन्दमा रमाउन सकिन्छ ।
विर्य नखसालीकन चरम आनन्द लिन सक्ने पनि हुन सक्छ ।
१)उत्तानो सुतेर सवैभन्दा राम्रो हुन्छ । बसेर र उभिएर पनि गर्न सकिन्छ । गहीरो श्वास लिदै मलद्वार र मुत्रद्वार खुम्च्याउने (कस्ने ) श्वास छोड्दै सामान्य स्थितिमा आउने गर्नु पर्दछ ।
२) टन्न खाएको र प्रेसर बढेको बेलामा नगर्नुहोला ।
३) केही अप्ठेरो भएमा थोरै थोरै विस्तारै बढाउनुहोला ।
४) शुरुका दिनमा ५-७ मिनेटबाट शुरु गरी पछि धेरै समय पनि गर्न सकिन्छ ।
तपाईले गर्नुभएको माया, सहयोग,लेनै मलाई आगामी लेखकालागि हौसला मिल्नेछ ।
संसारको सबैलाई चाहिने र सबै भन्दा बढि खुलेर कुरा गर्नु पर्ने विषय “यौनको ज्ञान बाड्नुहोस र आफु पनि सुरक्षित रहेर अरुलाइ पनि सुरक्षित राख्नुहोस ।
(लेखिका बिमला हुमागाईं पूर्वीय यौन मनोविज्ञान र कानुनका सोधमा संलग्न अन्वेषक हुनुहुन्छ)
५ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०७:५४ मा प्रकाशित